Chelsea oo iska diiday fursad ay ku shaqaaleysiin kartay xidig ka tisan kooxda Barcelona – Gool FM
Chelsea oo iska diiday fursad ay ku shaqaaleysiin kartay xidig ka tisan kooxda Barcelona
(Chelsea) 25 Luulyo 2018. Chelsea ayaa iska diiday fursad ay ku shaqaaleysiin kartay xidig ka tisan kooxda Barcelona xilli ciyaareedka soo aadan ee 2018/2019.
Wargeyska “Mundo Deportivo” gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Barcelona ay u bandhigtay Kooxda Chelsea saxiixa André Gomes.
Barcelona ayaa waday qorsho ay ku dooneesay in ay kagala soo saxiixato Chelsea xidiga reer Brazil ee Willian, waxaana miiska loo saaray kooxda reer London ee Blues aduun dhan 50 million euros iyo André Gomes.
Laakiin kooxda Chelsea ayaa iska diiday dalabka kaga yimid Barcelona, waxayn ku dhaga adeegtay in 70 million euros ay ku fasaxayaan saxiixa Willian Borges.
Wargeyska ayaa intaa ku daray in Barcelona ay go’aansatay inaysan sugin ilaa maalmaha ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga si ay u sameeyaan saxiixa Willian, taasoo Barca ku qasabtay inay si dhaqso ah kala soo saxiixato kooxda Bordeaux xidiga Malcolm.
Si kastaba André Gomes ayaa ku jira liiska ciyaartoyda uusan dooneynin macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde inuu ku dhex arko garoonka Cump Nou.
Real Madrid oo xiiseeneysa soo xera galinta Hugo Lloris, hadii ay ku fashilanto raacdada ay ugu jirto Thibaut Courtois